Iyo iPhone 6c ichave nebhatiri yakawanda uye RAM pane iyo 5c [RUMORI] | IPhone nhau
Runyerekupe zuva. Kana chinguva chakapfuura isu tanga tichitaura nezverunyerekupe rwunotiudza zvakare nezve isinga pinde mvura, ikozvino ndiyo shanduko yerunyerekupe kazhinji. iPhone 6c. Sezvakataurwa mu mavidar.comMasosi anobva kuFoxconn, kambani inoona nezve kuunganidza zvese zvinhu kuti iite iyo iPhone. Kana isu tikatambira ruzivo kubva kunharaunda yeAsia seyakavimbika, iyo iPhone 6c ichatanga kugadzirwa muna Ndira 2016 kuti izotangwa pakutanga kwegore. Mazhinji runyerekupe runodaro ichaunzwa munaKurume-Kubvumbi pamwe neipad ipad.
Kumwe kwekunyunyuta kwakapararira nevashandisi veiyo iPhone, kunyanya mumamodeli 4 inches kana zvishoma, ndeyekuti bhatiri harigare sekureba kwatinoda. Iyo iPhone 5c ine 1.510mAh bhatiri uye iyo iPhone 6c yaizove ne 1642mAh bhatiri. Hakusi kuti iko kuwedzera kukuru, asi kunofanirwa kucherechedzwa shanduko diki kana tikazvibatanidza neyakajeka processor.
Mukati, masosi, ayo anofanirwa kuve akavimbika, anoti ichave neA9 processor yakapihwa gore rino. Kana iri RAM, iyo iPhone 6c yaizoshandisa zvakafanana 2GB ye RAM kupfuura iyo iPhone 6s, chimwe chinhu icho chichiri kushamisika asi zvirokwazvo inhau dzakanaka kune vashandisi vanosarudza foni diki chero zvodii. Izvi zvinobvumidza iyo iPhone 6c kuve neyakaenzana kuita kana zvirinani kupfuura zvazvino mamodheru, chimwe chinhu icho, chokwadi, ndinozviona zvakaoma kutenda. Ndinozviona zvakaoma kutenda nekuti mutengo unozowanikwa neiyi iPhone nyowani dzinenge € 565 (4.000 yuan).
Panyaya yekugadzirwa, iyi iPhone nyowani ichave musanganiswa pakati pe iPhone 6 ne iPhone 5s. Inosvika ne girazi rakatenderedzwa nemakona uye nemavara akafanana neiyo iPhone 5s, inova Space Grey, Goridhe uye Sirivheri, iine yakafanana 4-inch screen ine 1.136 x 640 resolution. 8 megapixels, asi hazvizivikanwe kana ichave yakafanana neiyo iPhone 5s kana iyo iPhone 6. Zvisinei, hapana chinhu chinotaurwa nezve optical mufananidzo kudzikamiswa (OIS), saka zvingangoita kuti ichasvika isina iyo.
Chero nzira, ramba uchifunga kuti tiri kutaura nezverunyerekupe. Inguva chete ndiyo inozoziva kana zvazadzikiswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6 » Iyo iPhone 6c ichave nebhatiri rakawanda uye RAM pane iyo 5c [RUMORI]